Banyere Anyị - Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd.
Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd. bụ onye nrụpụta kachasị nke resin mgbanwe ion dị elu dị iche iche na China. Ahịrị ngwaahịa ụlọ ọrụ Dongli na -ekpuchi SAC, WAC, SBA, WBA, MEDED BED na ọpụrụiche resin na mmepụta kwa afọ nke 20000MTs (25000 M3) dị ka ọkwa ụlọ ọrụ, ọkwa nri, ọkwa ahụike, ọkwa elektrọnik na narị narị ụdị. Dongli bụ nnukwu onye nrụpụta ọkachamara nke resin mgbanwe ion na resin adsorption na China.
Afọ na azụmahịa
Kọntinent nke nkesa ahịa
Ahịa ego na 2020
Nhazi ngwaahịa na akara mmụta
Dịka onye nrụpụta pụrụ iche nke resin mgbanwe ion, anyị na-azụlite ma na-arụpụta beads dị iche iche site na 0.35-1.25mm, <0.3mm na> 1.2mm, yana nha ururu dị iche iche nke a na-eji na ụlọ ọrụ dị ka ọdụ ike, mmiri nwere ike ị ,ụ, ọgwụ, bayotechnology na hydrometallurgy na -adabere na ngwaahịa anyị ikewapụ, wepu, gbakee ma ọ bụ mgbasa ozi na ihe na ihe ndị mejupụtara ya. Ngwa ndị a enweghị njedebe.
e wuru anyị iji nye azịza ahaziri iche ma nyere aka dozie nsogbu gị kacha mgbagwoju anya.
Anyị na -agbasi mbọ ike maka izu oke, afọ ojuju ndị ahịa!
Ikike Mmepụta Okwu Mmalite
Ka ọ na -erule 2020, mmepụta kwa afọ ruru tọn 21000 (ihe dị ka mita cubic 27000), na -ekpuchi ọtụtụ usoro resin anyị na SAC, WAC, SBA, WBA, akwa agwakọtara, resins pụrụ iche wdg.
Na ngwaahịa anyị na -ebubata, SAC resin nwere akụkụ dị mkpa, nke abụọ bụ SBA, sochiri akwa resin na resin pụrụ iche.
N'ime ngwaahịa ndị a na -ebupụ, resin ọkwa nri ama ama nke ọma na ahịa ma ndị ahịa na -emezigharị ya nke ọma n'ihi mkpa na -arịwanye elu na nchekwa sitere na ọha ụwa.y
Ụlọ ọrụ ahụ ga -enye aka na ọha mmadụ ngwaahịa nwere ntụkwasị obi yana ọrụ zuru oke. Nabata ndị enyi sitere na ụdị ndụ niile ka ha gaa leta Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd. maka nduzi na mkparịta ụka azụmahịa.
Anyị na-anya isi na anyị emebela nkwado teknụzụ dị ukwuu na ndị nrụpụta resin ụwa na ndị ọkachamara kemịkalụ iji gboo mkpa ndị ahịa sitere na ngalaba ụlọ ọrụ dị iche iche, arụpụtala “ọtụtụ mmeri”.
Anyị na-elekwasị anya na nkwalite na-adịgide adịgide nke ịdị mma ngwaahịa na ahụmịhe ndị ahịa oge niile ka ọ bụrụ onye na-edozi nsogbu ka mma.